Hazi ego - Ndị na - eme nde
Ndị mmadụ n'otu n'otu & Ndị obere azụmaahịa
Anyị na-enye ezigbo azịza na ndụmọdụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu / ezinụlọ dị iche iche / obere azụmaahịa ..
Investors Immigrashọn Mmemme
Immigrashọn bụ ahịa anyị bụ isi. Nke a pụtara na ndị ahịa anyị na ndị ọrụ iwu kachasị mara ọrụ na-arụ ọrụ. Stepkwụ na achkwụ na-abịa nso mgbe niile.
Ndepụta mepere emepe na ọrụ ahaziri iche. Buzụ ma ọ bụ ire ma ọ bụ ịgbazite ụlọ / ụlọ / office / shop / ahịa / ala ubi / nkwari akụ / ụlọ mbikọ.
Nhazi ụlọ ọrụ, rtlọ ọrụ Virtual, Mpụga Akaụntụ, Ndebanye aha ahia, usoro HR ahaziri iche n'otu ebe.
Inye ego na akụrụngwa ga - enyere gị aka ịchekwaa ego gị maka mkpa azụmahịa ndị ọzọ. Jiri network anyị siri ike na ahụmịhe anyị.
Ihe niile emere n ’d ị mfe: Ego nnata nke nnata, nnata nke nnata ego.
Ibepu ego ụlọ akụ mere ka ọ dịrị ebe ọ bụla mfe na ụwa. Companylọ ọrụ anyị na-emegide imebi ego, azụma ọgwụ ọjọọ na ịzụ ahịa mmadụ, yabụ, Anyị anaghị akwado ndị ahịa dị otú ahụ.
Inye ego na Accountza Akaụntụ
Ọrụ agbakwunyere bara uru, na-enye gị ohere itinye uche na asọmpi isi gị. Ọ dị mma maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ ọhụrụ na-amalite na ikike ọchịchị ọhụrụ.
Nkwụnye ụgwọ & Ọrụ
Ọbụlagodi ndị ọkachamara kachasị nwee ahụike na ahụmịhe ịchọta, ịkwụ ụgwọ nwere ike bụrụ isi ọwụwa. Ọ bụ ubi pụrụ iche, yabụ hapụ ndị ọkachamara ka ọ jiri aka ha.
Anyị na-enyere ndị azụmaahịa aka iji uru ahụ na-erite uru ha ma tụgharịa azụmaahịa ha dum.
Valulele azụmaahịa bụ akụkụ dị oke mkpa na njikwa ego, ụtụ isi, ịkọ akụkọ, jikọtara ọnụ na inweta, wdg.
Ndụmọdụ na Nnabata
Acrossgagharị na mpaghara na-abụwanye nnukwu ọrụ maka arụmọrụ azụmahịa n'ụwa niile. Ndi okacha amara n’eme ka ndi ahia anyi di nfe.
Otu ọrụ maka nsogbu niile gbasara iwu, INWE. Anyị na ụlọ ọrụ ọka iwu, ụlọ ọrụ iwu na ndị otu na-akpakọrịta nwere ọnụ ụlọ ọrụ ọnụ.
Ohere International Business
Anyị na-azụta ma na-enye ụdị 3 dị iche iche nke Ohere inweta International